Yan Aung: အသံတိတ်မျက်ရည်....
စာရေးတာ အတွက်တင် မဟုတ်ပါဘူး
အစ်ကိုရေ ဒီတစ်ခါလည်းအရမ်းကောင်းပါလားလို့မပြောရက် တော့ပါဘူး။ ဘယ်လိုခံစားရတယ်ဆိုတာသိနေတော့။ သူကောင်းရာသုဂတိလားမှာပါ။
My condolences are with you… Loving kindness that we receive from our parents is usually unconditional…
ဒီပို့စ်လေးကို အခုမှဖတ်ရပါတယ်.ဖတ်ပြီး ငိုင်သွားမိတယ်။ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိသွားတယ်.
ကျမလဲ ဒီလိုပို့စ်လေးရေးဖို့ကြံစည်နေတာလေ. မရေးဖြစ်နေသေးတာပါ. ကျမ ဖေဖေ က ဖေဖော်ဝါရီလ ၇ ရက်နေ့မှာဆုံးတာ ၃ နှစ်ပြည့်မို့ ဒီလိုပို့စ်လေးရေးဖို့
ဒီပို့စ်လေးကို ၄နှစ်မြောက် ၄ကြိမ်မြောက်လာဖတ်ဖြစ်ပါတယ် နှစ်တိုင်းတနှစ်တကြိမ်လာဖတ်ဖြစ်ပေမယ့် ရင်ထဲမှာဆုပ်ခြေထားသလိုဖတ်ရပြီး အမြဲမျက်ဝန်းတွေစိုစွတ်ရပါတယ် ဘယ်တော့မှလည်းမရိုးနိုင်တဲ့အပြင် တနေ့ငါလည်းကြုံတွေ့ရမယ့်အဖြစ်တခုဆိုပြီး ပိုပြီးတော့မိဘတွေကို ဂရုစိုက်မိပါတယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အစ်ကို....